विश्वका लोकप्रिय १० माइक्रो कार, जसले कुनै बेला चर्चा पाएका थिए - नेपाल कुरा
विश्वका लोकप्रिय १० माइक्रो कार, जसले कुनै बेला चर्चा पाएका थिए
काठमाडौँ । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानका लागि सस्तो माइक्रो कार निकै नै लोकप्रिय रहे । कुनै जमानामा सानो तर मनमोहक माइक्रो कारले सबैको मन लोभ्याएको थियो । सन् १९४० देखि १९७० मा युरोपमा माइक्रो कार निकै लोकप्रिय सवारी साधन थियो । पहिलो माइक्रो कार जर्मनी र युकेमा निर्माण गरिएको थियो ।
चीनले निर्माण गर्यो सस्तो मिनी इलेक्ट्रीक कार, टेस्ला मोडल थ्री भन्दा तीन गुणा बढी बिक्यो
भिभोको वाई ५१ स्मार्टफोन बजारमा, मूल्य कति ?
सपनामा यस्ता चीजहरु देख्नुभएको छ ? अब छिटो धनी बन्दै हुनुहुन्छ !